Mareykanka oo Dalalka Yurub ugu baaqay Cadaadis dhaqaale oo La... | Universal Somali TV
Mareykanka oo Dalalka Yurub ugu baaqay Cadaadis dhaqaale oo La Saaro IIraan
Xoghayaha Arimaha Dibeda ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay wadamada midowga yurub in ay qaadaan talaabo hor leh oo lagu xoojinayo in cadaadis lagu saaro wadanka iiraan oo ka mid ah wadamada hodanka ku aah wax soo saarka saliida.
Mr Mike Pompeo ayaa bartiisa uu ku leeyahay Twiterka maanta eedeyn ugu soo jeediyay dowlada iiraan oo uu sheegay in ay ku xad gudubtaay sharciga hubka ee qaramada midoobay.
Waxaa uu ugu baaqay wadamada reer yurub in ay qaadaan talaabo la mid aah tan dowlada mareykanka si iiraaan loo saaro cuna qabateyn dhaqaale.
Pompeo oo sii hadlay ayaa wuxuu sheegay in ay waajib in la jaro dhaqaalaha iiraan kaga yimaada dalalka reer galbeedka oo uu tilmaaamay in u adeegsato falal ka argagixiso iyo xasaradaaha ka dhacaya gobolka.
Dowlada iiraan ayaa laa rumeysan yahay in ay garab weyn u tahay xukuumada Madaxweyne bashar al Assad oo dagaaal kula jirat mucaaradka siiriya iyo kooxaha mucaaradka ah ee ka dagaalama wadan yemen ee Xuuthiyiinta.
Kan-xigaImaaraadka oo Lagu eedeyay Xadgudub K...
Kan-horeDibad bax ka dhacay Nairobi oo saamey...
39,219,466 unique visits